St. Kitts Yakakosha Inobatsira Mukuvhurazve Tourism
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Kufamba Nhau » St. Kitts Yakakosha Inobatsira Mukuvhurazve Tourism
Kuputsa Kufamba Nhau • wedzero • Hurumende Nhau • Hospitality Industry • nhau • Kuvakazve • Kutarisirwa • Saint Kitts neNevis Kuputsa Nhau • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Zvakavanzika Zvokufamba • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • Akasiyana Nhau
Vamwe vanoti St. Kitts nzira yekushandisa kushanya panguva yedenda yakanga yakakomba, asi mhedzisiro yacho inozvitaurira
St. Kitts Gurukota Rezvekushanya Lindsay Grant akaburitsa mukana weSt Kitts naNevis mukuvhurazve indasitiri yekushanya kuchitsuwa
Zororo muNzvimbo ipfungwa inoonekwa seyeSt. Kitts nzira mukuvakazve kufamba. Iyo inouya neseti yezvishandiso yekuchengetedza kushanya kwakachengeteka.
Kwete chete jecha negungwa, asi makore mazana mashanu enhoroondo, uye chiitiko chakachengeteka cheCaribbean senge hapana chimwe chinoita St. Kitts nzvimbo yakasarudzika
Teerera kune Q&A
Makesi makumi mana nenomwe kubvira Coronavirus payakabuda, hapana akafa, hapana kana kukiya, uye zvese zvakavhurwa.
Aya ndiwo manhamba ekuenda kwakawanda aigona kungorota munguva dzekugara dzichikwira nekudzika mune zviri kuitika nekuda kwe COVID-19
Iyo Federation ye St. Kitts naNevis inyika yekuEast Caribbean yakave yakazvimiririra kubva kuUK muna 1983. Vagari ve53,000 venyika ino vanofarira imwe yemapasipoti akanakisa kuva neakavhisa-isina mawaniro epasi rose.
Makiromita zana emakiromita epasi aine mamwe emahombekombe akanaka kwazvo, zviitiko zvinoshamisa, uye nhoroondo yemakore 100-300 makore, St. Kitts paradhiso chaiyo inopisa.
St. Kitts naNevis Gurukota rezveKushanya, Zvifambiso neMachiteshi Hon. Lindsay FP Grant akabatana ne eTurboNews hurukuro nhasi yeboka rekuvakazve.kufamba kwakarongedzwa neWorld Tourism Network. WTN ine nyanzvi dzekushanya mune ese akazvimirira uye ehurumende chikamu mune gumi nemaviri nyika pakati penhengo dzadzo.
60% yeSt Kitts neNevis's GDP iri, zvakananga uye zvisina kunangana, zvinoenderana neindasitiri yekufambisa neyekushanya. COVID-19 yakaunza matambudziko akakura, asi nyika diki yechitsuwa iyi yakakwanisa kuchengetedza vagari, vagari, uye vashanyi vakachengeteka.
Nyika yakavhara miganhu yayo kwechinguva muna 2020 asi yakavhurwa musi waGumiguru 31. Grant akati yaive nzira yese yenzanga patakavhura. Wese munhu akagadzirira uye munhu wese aive nebasa rekutangazve kuvhura indasitiri yekufambisa neyekushanya nenzira yakachengeteka uye ine mutoro.
Nyika payakavhura yepamusorosoro yekutevera system yaive panzvimbo. Vashanyi vaive vasina mukana wekusanganisa mukati memharaunda yemuno, uye mahotera vakapinda muchirongwa chakadaidzwa kuti "Zororo munzvimbo."
COVID-19 yaisungirwa vasati vasvika. Kuedzwa kwechipiri kwaidikanwa mushure memazuva manomwe. Mazuva manomwe ekutanga emunhu wese aishanyira chitsuwa aingotenderwa kuhotera.
Nekuda kweizvozvo nyika haisati yave nerufu kubva kuhutachiona.
Inzwa kubva kuna gurukota zvakananga muiyi Q&A na World Tourism Network.